Iskuullada oo la soo jeediyey in sannad dheeri ah lagu daro - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka tacliinta Jan Björklund (FP) oo ku sugan dugsiga Engelbrekt. Sawirle: Anders Wiklund /TT.
Iskuullada oo la soo jeediyey in sannad dheeri ah lagu daro
Iswiidhen iyo waddan kale ayunbaa da' sare ku bilaaba iskuulka
La daabacay onsdag 8 januari 2014 kl 14.10
Wixii ka dambeeyey diseembar ee sannadkii ina dhaafay 2013 ayay doodda iskuulladu ay salka ku haysay natiijada ardeyda ee dhulka hoosta u sii galeeysa, sida uu muujiyay baaritaankii tis-barbar-dhigga tacliinta ee Pisa ee waddammada xubnaha ka ah OECD dhammaan saddexda weji ee fahanka akhriska, xisaabta iyo sayniskaba.
Si haddaba middaa looga gudbo ayuu maamulka dawladdu soo ban-dhigay fikir ah in sannad lagu daro wax-barashada khasabka ah ee dhallaanka lana gaarsiiyo 10 sannadood, halka ay iminka ka tahay 9 sannadood. Iyo in la waajibiyo laga bilaabo da'da lix sannadood. Middaa ayey macnaheeduy tahay in dugsiga hoose noqdo afar sannadood, halka uu iminka ka yahay 3 sannadood, sifa uu sheegay Jan Björklund, ahna wasiirka tacliinta:
- Hoowlaha iskuulku waxey u baahan yihiin xilli ka badan midka iminka la dhigto. Haddii dalka Iswiidhen loo barbar-dhigo waddammada xubnaha ka ah ururka Midowga Yurub iyo kuwa ku jira ururka OECD waxaa jira oo keliya laba waddan oo da' dambe ku bilaaba tacliinta. Waa Iswiidhen iyo dal ka mid ah waddammada dhaca Baaltika. Dhammaan waddammada kale waxey ku bilaabaan dugsiga khasabka ah da' ka yar, halka dhanka kale ey sannadaha tacliintuna ka badan yihiin. Sidaa daraadeed ayuu maanta dalkan ey dhallaanku tacliinta u bilaabaan goor dambe, isla-markaana ey horey uga baxaan.
Waxaa iyaduna sannad intaa ka sii dheer loogu dareyaa dhallaanka ku guuleey-san waaya fasalka sagaalaad si ey ugu gudbaan dugsiga sare, sannadkaasina oo markaa ka dhigaya tacliinta khasabka ah 11 sannadood.
Fikirkan ayuu soo dhoweeyay ururka daladda ururrada macallimiinta. Halka uu xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga qudhiisu dooneyo in xilliga tacliinta la kordhiyo, hase yeeshee sheegay in aaney ku fileeyn sidii kor loogu soo qaadi lahaa tayada tacliinta dugsiyada hoose/dhexe, sida uu sheegay Ibrahim Baylan, af-hayeenka xisbiga ee siyaasadda tacliinta:
- Fikirkan ayaan annagu soo jeediney, maadaama aanu qabno inuu yahay tallaabo sax ah, hase yeeshee maahan tallaabo ku filan sidii tayada hooseeysa ee iskuulka wax looga qaban lahaa. Waxaan rajeeynayay in dawladdu soo ban-dhigi doonto tallaabooyin wax looga qabaneyo xaaladda dhabta ah, sida matalan in la dhimo tirada ee fasallada, macallimiin xirfad u leh habka tacliinta. Hase yeeshee dawladdu weli xoogga isugu geeynayso sidii cay canshuurta-dhimis, halkii ey tacliinta ka miisaaniyad gelin lahayd, sida uu sheegay Ibrahim Baylan.
Is-bedelkan ayay dawladdu aamin-san tahay inuu wakhti u baahan yahay. Sidaa daraadeedna ay rajeeyneyso inuu hir-galo doorashada sannadka dabadeed inta aan la gaarin doorashada xigta ee sannadka 2017, ama wixii ka dambeeya. Laga bilaabo sannadkii 1962 ayuu dugsiga khasabku ahaa sagaal sannadood.
Ma loo baahan yahay in iskuullada lagu kordhiyo sannad ?